WIFi HD Hidden Camera Desk, Teepu oriọna, Vidiyo Ọhụụ Night (SPY077) | Ngwọta OMG
WIFI HD zoro ezo igwefoto esere, okpokoro okpokoro, ọhụụ ọhụụ abalị (SPY077)
Ọ bụ HD1080P Nledo Igwefoto Na-akwado Wi-Fi Njikọ. Vidio vidio na nyochaa ụlọ gị. Gbanwee mkpebi iji nweta mma kachasị nke vidiyo na ihe oyiyi dị mfe.
Igwe Nchekwa Igwefoto zoro ezo nke WiFi nwere ọtụtụ ọrụ gụnyere Oghere ụda, igwefoto nche na ọhụụ abalị, Nlekọta anya vidiyo oge na nyochaa na App / Onye ahịa, nchọpụta Motion, Mkpuchi vidiyo.
Na-akwado nchọpụta ụda, mkpu ụda na mkpu ozi E-mail. Mgbe enyere aka nchọpụta, ngwaọrụ ahụ ga-edekọ vidiyo na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na achọpụtara imegharị n'ime ubi ọ na-enyocha.
Enwere ike gbanwee oriọna ahụ na App, nke na-eme ka eserese vidiyo na ihe oyiyi na ìhè ọkụ ọhụụ abalị na ebe obibi gbara ọchịchịrị, na nro nke ìhè.
N'etiti igwefoto zoro ezo ị na-anụ ma na-ekwurịta okwu n'etiti ekwentị na igwefoto. Ị nwere ike iso nwa gị ma ọ bụ anụ ụlọ gị na-emetụ aka n'oge ọ bụla ọbụlagodi na ekwentị gị na Wi-Fi ma ọ bụ 3G / 4G.
HD 1080P Ikuku Wi-Fi Ikuku Nchekwa Igwefoto
Ntọala Wi-Fi nke Igwefoto Igwefoto Igwefoto, ibi ndụ vidiyo vidio:
Ị nwere ike ịlele vidio na-ahụ oge ma hụ ọnụ ụlọ gị site na App (CBHCAM) n'oge ọ bụla.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịlele vidiyo dị ndụ na onye na-ahụ maka igwefoto IP (na-akwado ngwaọrụ kwadoro Windows).
Ị nwere ike ịhazigharị mkpebi iji nweta mma kachasị mma nke vidiyo na ihe oyiyi.
Ụlọ Nche Ụlọ Nche Igwefoto Nchekwa Ọfụfụ:
Iwere foto, Onye nchịkọta vidiyo, nchọpụta Motion, oriọna oriọna LED, ọhụụ abalị hụrụ igwefoto ezo .Cheop recoding. Njikọ Wi-Fi.
Enyo ọkụ ihu abalị ọhụụ nwere ike gbanwee na App
Nke na-eme ka o doo anya na vidiyo na foto na ìhè ọkụ ihu igwe na nzuzo na gburugburu ọchịchịrị, na ịdị nwayọọ nke ìhè ahụ.
Onye na-ebu ígwè nwere 14 sentimita ogologo ma nwee mgbanwe kwesịrị ekwesị, nke na-enye ya ohere ịgbanwe nhazi 360 iji mezuo ihe ị chọrọ.
E wezụga nke ahụ, ọ nwere mma dị mma na ọkpụkpụ luster.
WiFi Igwefoto Izobe Echebe Zifi, Free View Remote view
WiFi Igwefoto Igwefoto zoro ezo nke Igodo Ntube na Ntaneti Google ma ọ bụ Ụlọ Ahịa Apple
Mfe iji wụnye dịka ntuziaka ntuziaka na enyi na enyi APP
Mfe idozi ma jiri
Naanị ịgbaso ntuziaka onye ọrụ dị mfe iji mee nzọụkwụ site na nkwụsị
1 Wi-Fi Nche Igwe Nchekwa igwefoto
Ntuziaka ntuziaka 1
8.3 x 6.2 x 3.2 sentimita
Nzuzo 11923 8 Echiche Taa